We Fight We Win. -- " More than Media ": စစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ် (၁၅) မှ ခပ်ညံ့ ညံ့ တစ်ယောက် က ဘာကြောင့် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဖြစ် နေရသလဲ ?...ဒိလူဟာဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲ ?
စစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ် (၁၅) မှ ခပ်ညံ့ ညံ့ တစ်ယောက် က ဘာကြောင့် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဖြစ် နေရသလဲ ?...ဒိလူဟာဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲ ?
တနင်္သာရီတိုင်း ကော့သောင်း မြို့နယ်ပင်လယ်ပြင် ထိုင်း-မြန်မာ ရေပိုင်နက်အနီး ခရစ္စတီးကျွန်းတွင် ၁၉၉၈ ခု မေလက မြန်မာစစ်တပ်သည် အပြစ်မဲ့အရပ်သား နို့စို့ကလေးနှင့် အမျိုးသမီးများပါမကျန် စုစုပေါင်း ၈၁ ဦးကို သဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင် သေနတ်နှင့် ပစ်သတ်ခဲ့သည်။ ထိုသတ်ဖြတ်မှုတွင် စစ်ဗျူဟာမှူးအဖြစ် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ပြီး အမိန့်ပေးခဲ့သူသည် ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်မည်၊ ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်ဟု ပြောလိုက်သော ထိုစဉ်က ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း၊ ယခု လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း ဖြစ်သည်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး မလုပ်လိုသောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ အဖြုတ်ခံရသူ၊ စစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ် (၁၈) ကျောင်းဆင်း ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်အောင်၏ အမှတ် (၁၃) စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှု တပ်မမှူးလက်အောက်တွင် ခရစ္စတီးကျွန်း စစ်ဆင်ရေး၌ ဗျူဟာမှူးအဖြစ် လူသတ်သမားတာဝန်ကို ယူခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ အမိန့်ဖြင့် အပြစ်မဲ့အရပ်သား ၈၁ ဦးကို သတ်ခဲ့သည့်အတွက် ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းအား ချီးမြောက်သည့်အနေဖြင့် တပ်ချုပ်ကြီးမှ မကွေးတိုင်း အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌရာထူး ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင် သမဝါယမဝန်ကြီးရာထူးနှင့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း တွဲဘက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးရာထူးတို့ကို ရခဲ့သည်။ ထို့နောက် နအဖ စစ်အစိုးရခေတ်မှ ယနေ့အထိ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ရာထူးကို ဆက်ရထားသူ ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် ဆွေးမျိုးနီးစပ် တော်သယောင်၊ နီးစပ်သယောင် ဝန်ကြီးအသိုင်းအဝန်းအတွင်း သတင်းလွှင့်ထားပါသည်။
ခရစ္စတီးကျွန်း စစ်ဆင်ရေးအတွင်း လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ခဲ့မှုသည် မည်သို့မျှ ငြင်းမရနိုင်သည့် ဖြစ်စဉ်တခု ဖြစ်နေသည့်အတွက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ အပါဝင် စစ်ခေါင်းဆောင်များသည် တစ္ဆေခြောက်နေသလို ခံစားနေရဆဲဖြစ်ပါသည်။ နဂိုကြောက်စိတ်အခံရှိသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေသည် ယနေ့အချိန်တွင် ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် သောမတ်ကင်တားနား၏ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးအများစုက ထောက်ခံမှုပေးထားသော မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ရေးကို အထူးစိုးရိမ်ကြောင့်ကြနေသည့်အတွက် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဇော်မင်းလို လူစားမျိုးကို မွေးထားရဆဲဖြစ်သည်။
စစ်ဆင်ရေးတွင် တပ်မတော်ကြည်းမှ ကော့သောင်းအခြေစိုက် စစ်ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်း (လက်ရှိ လျှပ်စစ် ဝန်ကြီး)၊ အမှတ် (၂၆၂) ခြေလျင်တပ်ရင်းမှူး ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး စိုးတင် (နောက်ဆုံးသိရသရွေ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဌာန)၊ အမှတ် (၄၀၅) ခြေမြန်တပ်ရင်းမှူး ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းဆွေ (နောက်ဆုံး သိရသရွေ့ စစ်ဗျူဟာမှူး) တို့ ပါဝင်သည်။ ရေတပ်မှ ဇာဒက်ကြီး ရေတပ်စခန်းမှူး ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး မောင်မောင်သစ် (နောက်ဆုံးသိရသရွေ့ ဒု ဌာနချုပ်မှူး၊ တနင်္သာရီ ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်) ဦးစီးသော စစ်သင်္ဘောအုပ်စု၊ တပ်မတော်လေမှ ရဟတ်ယာဉ် (၂) စီး ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ စစ်ဦးစီးအရာရှိများအဖြစ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) မှ ဗိုလ်မှူး တင့်ဆန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ရေ) မှ ဗိုလ်မှူး မောင်မောင်လတ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (လေ) မှ ဗိုလ်မှူး မောင်မောင်သန်း၊ တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးမှ ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
I cannot read this article. What type of font do I need to install?